नवजात शि”शुको टाउ”कोमा चो”ट, श-व लिएर आए आफन्त , अ”स्पतालको ग”ल्ती हो? exclusive gandaki hospital - सप्तरंगी संसार::– रंगिबिहिनहरुको रंग
नवजात शि”शुको टाउ”कोमा चो”ट, श-व लिएर आए आफन्त , अ”स्पतालको ग”ल्ती हो? exclusive gandaki hospital
मङ्लबार, अशोज १९, २०७८
यदि तपाईको दाँत पहेलो भएको छ वा मुखबाट श्वास गन्हाउँछ भने एउटा उपाय तपाईका लागि रामबाण हुनसक्छ । अक्सर हामी पहेलो दाँतलाई टूथपेस्टले माझेर सफा गर्ने प्रयास गर्छाै । तर, दाँत माझ्दा दाँत सफा हुनुको सट्टा दाँत घिसिन्छ । र ३० देखि ४० वर्षको उमेरमै दाँत टुट्न थाल्छ ।
दाँतलाई सफा गर्ने घरेलु उपाय पनी छन् जसले दाँतलाई सेतो बनाएर चम्काउछ र दाँतलाई कुनै नोक्सानी पनी पुगाउँदैन्। १) कागतीको आधा भाग निचोरेको टुक्रामा चार बूँद तोरीको तेल, थोरै नून र हिल्दी हालेर दाँत माझ्नुस् । पहेलो दाँतलाई चम्किनेगरी सेतो बनाउनेछ । दाँत सफा देखिनेछ । २) कागतीको बोक्रा घाममा सुकाएर पिस्नुस् । यसका थोरै खाने सोडा र नून मिसाएर दाँत
माझ्नुस् । दाँत चम्किन थाल्नेछ । सफा राख्नेछ । दाँतको सामान्य रोग पनी ठिक हुनेछ । ३) कागतीको बोक्रा घाममा सुकाएर पिस्नुस् र माझ्नुस् । यसबाट दाँत सफा हुनेछ र श्वास गन्हाउने समस्या पनी दुर हुनेछ । ४) कागतीको बोक्रा घाममा सुकाएर पिस्नुस् । यसमा फिटकरी (ढिके नून) पिसेर मिलाउनुस् । त्यसपछि नित्य दाँत माझ्दा
दाँत चमकदार हुन्छ र दुखाई कम गर्छ । ५) कागतीको रसमा ब्रुस डुबाएर माझ्दा दाँत चम्किन थाल्छ । ६) नून, तोरीको तेल र कागतीको रस मिलाएर माझ्दा दाँत बोलियो हुन्छ । प्रायः दाँतमा राख्ने सबै रोगबाट बचाउँछ । निचोरेको कागतीको साना सना टुक्रा बनाएर दाँत सफा गर्दा दाँत चम्किन थाल्छ । (ओन्ली आयुर्वेद) हामीले थप केहि अनमोल भनाईहरू पनि लियाएका छौ : १.
हौसला नहार खसेर ए जिन्दगी ! यदि दर्द यहाँ भेटिन्छ भने औषधी पनि यहि भेटिन्छ । २. चाहे जमाना जति नै मेरो विरुद्धमा होस , हिड्छु त्यही बाटोमा जुन बाटो साचो र सफा हुन्छ । ३. त्यो मान्छेहरु कहिल्यै कसैका हुदैनन जसले मित्रता र सम्बन्धलाई कपडाको जस्तो बदल्ने गर्छ
।४. एउटा रोटी दिन सकेन त्यो निर्दोषलाई तर त्यो तस्बिर लाखौमा बिक्यो जसमा उ भोको बसेको थियो । ५. मान्छे कुरा दिलको गर्छन तर आज पनि प्रेम अनुहार बाटै हुने गर्छ । ६. एउटा पुस्तकालयमा राखिएको गिता र कुरान कहिल्यै लड्दैनन र जो यिनीहरुको लागि लड्छन उनिहरुले यसलाई कहिल्यै पढ्दैनन ।८. सानो मान्छे र सानो “नोट” कठिन परीस्थितिमा काम आउँछ व्यवहार सबैसित राख्नुस
पुरै गाउँनै छोडेर हिंडेका पीडितहरुलाई बिदेशबाट आयो यत्रो सहयोग
विराटनगरमा भ्यान भित्र २८ वटा मानव ख,प्पर र हा,ड भेटियो!
दाङ, बाँकेको सिमा क्षेत्रमा वन्यजन्तुको आ,तंक : ‘लमही—अमिलिया सडकमा निस्कन थाले बा,घ र चि,तुवा!
२७ सय वर्ष पुरानो शौचालय फेला परेपछि पुरातत्वविद् भन्छन्: अहिलेका भन्दा प्राचीन कालका मानिस झन् सौखिन!
ब,न्दुक देखाएर लाखौंको गरगहना लु,टपाट!
बिनोद खड्का भन्छन म त केटा हु सबैको अगाडि रु,न पनि सक्दिन भन्दै भाबुक भए!
२०७८ साल असार २४ गतेको भारी वर्षले क्षतविक्षत भएको एउटा गाउँ...
विराटनगरमा मंगलबार एउटा बे,वासिरसे भ्यानबाट मानव कं,कालहरु भेटिएका छन्। सशस्त्र प्रहरीले...
दाङ देउखुरी रिहार देखि बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र प्रवेश गर्दा अब सबैले...
जेरूसेलममा पुरातत्वविद्हरुले २७ सय वर्ष पुरानो शौचालय फेला पारेका छन् ।...
महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका–९ फुल्हट्टा गाउँमा आज बिहान लु,टेराको समूहले ब,न्दुक देखाइ...
अनिता खड्का र विनोद खड्का यो जोडीलाई नचिन्ने सायदै कम होलान्...
पाकिस्तानमा भू,कम्प, कम्तीमा १८ जनाको मृ,त्यु
पाकिस्तानको बलोचिस्तान प्रान्तमा भू,कम्प जाँदा कम्तीमा १८ जनाको मृत्यु भएको छ...
यसकारण राई समुदायले बाख्राका मासु खाँदैनन्!
मुत्दुममा बाख्रालाई किरात राई समुदायले अपवित्र मान्नुुका कारणबारे चतुुरभक्त दुमी राई...
बिन्ती छ कसैले पनि बेवास्था नगरिदिनुहोला,यो बाबुको ??
बिन्ती छ कसैले पनि बेवास्था नगरिदिनुहोला,यो बाबुको छिटो निको हुने प्राथाना...
गाउँपालिका अध्यक्ष बनिन् २२ वर्षीया राज्यलक्ष्मी!
जुम्लाको सिँजा गाउँपालिकाले स्थानीय २२ वर्षीया राज्यलक्ष्मी हमाललाई एक दिनको लागि...
रचना आर्ट एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा संचालित
सप्तरंगी संसार (saptarangisansar.com)
कम्पनी दर्ता नं.: २३४५/०७६/०७७
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं.: २४९४/०७७/०७८
प्रेश काउन्सिल नेपालमा समेत सुचिकृत
ठेगाना : काठमान्डौ महानगरपालिका २८, बागबजार काठमान्डौ
फोन : 9851089758
इमेल : Saptarangisansar@gmail.com
रचना आर्ट एण्ड मिडिया प्रा.लि द्वारा संचालित
संचालक : रेशम बहादुर बोहोरा
प्रकाशक /प्रधान सम्पादक : रेशम बहादुर बोहोरा
सम्पादक : सुजन बौडेल
© 2021 सप्तरंगी संसार All right reserved Site By : Himal Creation